कन्चनपुरबाट लखेटिए कांग्रेस नेता एनपी साउँद, ज्यान जोगाउन मुस्किल – Sudur Sanchar
कन्चनपुरबाट लखेटिए कांग्रेस नेता एनपी साउँद, ज्यान जोगाउन मुस्किल
पुष १५, २०७८ बिहिबार 90
काठमाडौ। नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउँद गृहजिल्ला कन्चनपुरबाट लखेटिएका छन्। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष बाट विस्थापितहरूले लखेटेको गुनासो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राखेका छन्।
कञ्चनपुरका पूर्वसांसद समेत रहेका साउँदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो क्षेत्रका पीडितको समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको र
आफूले मुख देखाउने अवस्था समेत नभएको, अप्ठ्यारो भएको गुनासो प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवासँग गरेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो।
उनको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले समस्या १ हप्ताभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोमवार सरकारी निवास बालुवाटारमा कांग्रेस नेता साउँदको नेतृत्वमा
आएका आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले १ हप्ताभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
२०५८ सालमा तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला विभिन्न बस्तीका नागरिकलाई विस्थापित गरिएको थियो। विस्थापनाको २० वर्षसम्म पनि पुनःस्थापना नभएपछि पीडितहरू राज्यलाई दबाब दिन फेरि एकपटक राजधानी काठमाडौं आएका छन्।
२० वर्षमा पटक–पटक समस्या समाधान आयोग बने पनि ठोस प्रगति हुन सकेन। पछिल्लो ३०औं आयोगले पीडितलाई १० कट्टा जमिन र क्षतिपूर्ति दिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो तर प्रतिवेदन वन मन्त्रालयबाट अघि बढेको छैन।
यसक्रममा काठमाडौं आएको आरक्ष पीडित टोलीले वनमन्त्री रामसहाय यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर अघि बढ्ने वनमन्त्री यादवको आश्वासनपछि पीडितको टोलीले मंगलवार प्रधानमन्त्री देउवा भेटेको हो।
पीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण समस्या समाधान गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै अब कुनै हालतमा समाधान गर्ने दृढता व्यक्त गरे।
यसअघि पनि आश्वासन पाएको तर समाधान नभएको गुनासो पीडितले गरेपछि देउवाले फेरि भने, यसपालि आरक्षको समस्या समाधान हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ। कुनै हालतमा हुन्छ। तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। १ हप्तामा समस्या समाधान हुन्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको दृढ आश्वासनपछि आरक्ष पीडित संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम १ हप्तालाई स्थगित गरेको छ। जिल्लामा सडक चक्काजामदेखि सीडीओ कार्यालय घेराउसम्म गरेको समितिले राजधानीमा प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेता भेट्ने र माग सम्बोधन नभए,
माइतीघरमा धर्नामा बस्ने कार्यक्रम बनाएर काठमाडौं आएको थियो। समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक आश्वासन पाएकाले आफूहरू आशावादी रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो समस्याबारे प्रत्यक्ष जानकार हुनुहुन्छ।
उहाँकै पालबाट शुरू भएको यो समस्या उहाँकै पालामा समाधान हुनेमा आशावादी छौं। १ हप्तालाई आन्दोलन स्थगित गरेका छौं। समाधान भएन भने फेरि जिल्लाबाट पीडितहरू अझ ठूलो संख्यामा राजधानी आएर आन्दोलन चर्काउँछौं, भट्टले भने।
समितिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेको छ। ओलीलाई १९ दिनको वाचा स्मरण गराइने सचिव भट्टले बताए।
उहाँ ओली संसद विघटनपछि कञ्चनपुर पुगेर १९ दिनभित्र आरक्ष पीडितले जग्गा पाउँछन् भनेर भन्नुभएको थियो। १९ महिना बित्न लाग्यो जग्गा त केही पनि पाएनौं। यहीँ कुरा ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
हाम्रो समस्याबारे उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षीबाट पहल गरिदिन अनुरोध गर्छौं, उनले भने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि पटक–पटक पीडितको घरमा गए पनि समस्या समाधानमा कुनै चासो नदिएको गुनासो गरे।
Prevनेपाली सेनाका २५ हजार फौज सामुहिक तालिमका लागि ‘ईलाकामा’ ?
Nextअरुलाई फसाउन खोज्दा आफै फसे , हेर्नुहोस!
बुद्ध एयर अवतरण हुन नसकेपछि ४० मिनेट आकाशमै एक महिला जहाजभित्रै बे’होस !
पाल्पा बस दुर्घ’टना अपडेट : ज्या’न गुमाउनेको परिचय खुल्यो
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (317)
नरिवल तेलको विवादः यसले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? (294)
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (256)
नेकपामा किन असन्तुष्ट छ माधव नेपाल समूह ? (254)
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (220)
हेलिकोप्टरबाट डोजर लगेर सिस्ने हिमालको काखमा सडक बनाइँदै (177)
३.	चर्चित अभिनेत्री रायमा बन्द बोराभित्र शरिर दुई टु;;क्रा भएको अवस्थामा मृ;;त भे;;टिइन् (90)
६.	भ्वाइस अफ किड्स जितेपछि आफ्नो कोचलाई ढोग्दै जेनिशले भने, यो पैसाले आमाको सम्झनामा स्कुल बनाउछु (81)